Daawo:Sheeko Jaceyl Ah Oo Xasuus Dheer Qalbigaaga Ku Reebi Doonta..!! | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Daawo:Sheeko Jaceyl Ah Oo Xasuus Dheer Qalbigaaga Ku Reebi Doonta..!!
Daawo:Sheeko Jaceyl Ah Oo Xasuus Dheer Qalbigaaga Ku Reebi Doonta..!!
Bulsha:- waa xili daruuruhu cirka wada dabooleen . Oo naflaha dhammantis waa uu faraxsanyahay dad. Dugaag iyo duuyadaba ciska ayeey dhawrayaan oo waxaa lasugayaa curashada roobkii guga waa xiliga Geel jiraha u sacbatvmayo guri yagleelid iyo guur xalaal ah .oo waxaa soo afjarmayo abaarihi wad badan so hay. Gashaamtida reerka u googtana ay isku diyarineyso guur xalaal ah waxaneyn dooneysa in ay kamid noqoto dadka sanadkaan ka faa,ideysan doona ee dhidibada u aasi doono mustaqbal iyo iyo reer u gooni ah naftooda.
Gobolkan hiiraan waxaa ku nool dad xoolo dhaqata ah isla markana ah reer guraay. Reeruhu waxa ay iska wareysanayaan halka loo sahantagi lahaa, kuwa baa ku talinaya inaan lagurin oo roobka la sugo. Inkasta oo ay figradaha lagu kala duwanyahay hadana dood iyo muran saas u baahsan majirin oo deegaanku waxa uu lagaa hogaan lagaqaato talada iyo iska warqab mideysan.
Waxaana lasugayaa halka uu talada marin doono marijirn cid farahagashado oo asiga ayaa looga danbeeyaa laguna xushmeeyaa go.annka. NUUR IYO UBAX waa laba lamaane ee wa cadkooda yahay guur.
Waxana lagu balamay in xirirka daba dheeraaday la soo afjaro. Ayaa goo lawada sugaay kolka dhibicda hoorto dhulkane noqdo barwaaqo iyo roob . Majirin iska waqqab kadanbeeyay maalinti lawada balamay oo xoolaha lala joogay. Laakin maanta labaduba dhagaha kor ayeey u taagayan oo mid kastana waxaa ka go.an meel marinta balantii lawada galay ee guur.
Iyadoo reerahana la iska soo agdhaweeyay siduu qorshaha ahaayba marki hore. Kadibna waxaa loogeeda xaartay hadalkii duugmay si loo hubiyo. Inuu yimid is badal iyo in wax waliba sidooda yihin . Balse nasiib wanaagsan riyadu waa mid u muqado run. Mudo kooban ayuu soconayey kulama joogta ah iyo falanqeynta qaabka loo wajihi lahaa shaxda guurka wax kastana maalin maalinta ka danbeyso way sii fududaanayaan. Majirin sharuudo badan sida reer magaalka iyo iyo qarash macnana daro loo adeegsanaayo.
Ugu danbeyntii waxaa la soo gunaanaday shirki wada tashiga ee dhaxdooda ahaa iyadoo ugu danbeyn lagu balamay in arinka loo weeciyo ficil iyo hor usocod. Ugu danbeyntii akhristayaasheena Reegaay.com si qurux badan oo loo dhanyahay ayuu u dhacay guurkooda. BASHIIR C/AHI OSMAN : Baladweyne Muqdisho Xamar Cadeey